Zvinyorwa zvemazuva akaipa | Zvazvino Zvinyorwa
Ndiani mumwe uye ndiani asina zuva rakaipa zuva neapo nekufamba kwenguva (ndinoshuva dai raingova rimwe chete, handiti?). Naizvozvo, ndichitora mukana wekuti iri vhiki revhiki, kuti tine nguva yakawanda yekuverenga, kufunga, kuzorora uye kuzorora, ndinokusiira iwe nezvinyorwa zviviri izvi nemakuru maviri ezvinyorwa: Walt Whitman y Pablo Neruda. Imwe neimwe yavo nemaitiro avo asi neyakajairika meseji: rarama, rarama uye urarame.
Kana iwe uine zuva rakashata, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, verenga izvi zvinyorwa zviviri. Ndino vimbisa kuti mushure mekuiverenga, iwe unozonzwa zviri nani zvishoma uye wotanga kuona zvinhu neimwe nzira. Nekuti kune zvinyorwa zvemazuva akashata. Nekuti kuverenga kunogona kuve kurapa kukuru kurwisa kuora moyo.
"Usamira" naWalt ​​Whitman
Usarega zuva richipera usati wakura zvishoma,
usina kufara, usina kuwedzera zviroto zvako.
Usazvirega uchikundwa nekuora moyo.
Usarega chero munhu kuti atore kodzero yekutaura zvauri,
izvo zvinenge zvichitoda.
Usarega kukoshesa kuita hupenyu hwako chimwe chinhu chinoshamisa.
Usarega kutenda kuti mazwi uye nhetembo
vanogona kushandura nyika.
Hazvina mhosva kuti chimiro chedu chakamira sei.
Isu tiri vanhu vazere neshungu.
Hupenyu igwenga uye oasis.
Zvinotirovera pasi, zvinotikuvadza,
zvinoita isu protagonists
yenhoroondo yedu pachedu.
Kunyange mhepo ichivhuvhuta ichipesana,
iro basa rine simba rinoenderera:
Iwe unogona kupa neumwe stanza.
nekuti muzviroto munhu akasununguka.
Usawire mukukanganisa kwakanyanya.
Vazhinji vanogara mukunyarara kunotyisa.
"Ini emit mhere yangu kuburikidza matenga enyika ino",
Anokoshesa runako rwezvinhu zvakapusa.
Iwe unogona kugadzira nhetembo dzakanaka pamusoro pezvinhu zvidiki,
asi hatigoni kukwasva tichipikisana nesu.
Izvo zvinoshandura hupenyu kugehena.
Nakidzwa nekutya kunokonzera iwe
iva nehupenyu kumberi.
Funga kuti mauri mune ramangwana
uye utarisane nebasa nokudada uye usingatyi.
Dzidza kune avo vanogona kukudzidzisa.
Zviitiko zveavo vakatitangira
ye "vadetembi vedu vakafa",
kukubatsira iwe kufamba kuburikidza nehupenyu
Nzanga yanhasi is us:
Ivo "vadetembi vapenyu".
Usarega hupenyu huchikupfuura iwe usiri kurarama ...
"Usapa mhosva chero munhu" naPablo Neruda
Usambofa wakanyunyuta nezve chero munhu kana chero chinhu
Iwe waita zvawaida muhupenyu hwako.
Gamuchira kuoma kwekuzvivaka pachako
Uye hushingi hwekutanga kuzvigadzirisa.
Iye murume wechokwadi anokunda
Inosimuka kubva mumadota ekukanganisa kwayo.
Usambofa wakanyunyuta nezvekusurukirwa kwako kana mhanza yako
Tarisana nazvo nehushingi uye uzvigamuchire.
Mune imwe nzira kana imwe iyo mhedzisiro yezviito zvako
Uye zvinoratidza kuti iwe unofanirwa kugara uchikunda.
Usashungurudzika nekutadza kwako
Usazvibhadharise kune mumwe.
Gamuchira izvozvi kana iwe uenderere mberi
Kuzvipembedza semwana mudiki.
Rangarira kuti chero nguva
uye kuti hapana chinotyisa kukanda mapfumo pasi.
Usakanganwa kuti chikonzero chechipo chako ndechekare;
sezvo chikonzero chenguva yako yemberi chichava chako ikozvino
Dzidza kubva kune akashinga, kubva kune ane simba;
Kune avo vasingagamuchire mamiriro,
Ndiani achararama zvisinei nezvose.
Funga zvishoma nezve ako matambudziko
Uye zvakawanda mubasa rako
uye mhinduro dzichauya kuzosangana newe pachavo.
Dzidza kuzvarwa kubva pakurwadziwa
Uye kuva mukuru
kupfuura zvipingamupinyi zvikuru
Tarisa mugirazi rako pachako uye uchave wakasununguka uye wakasimba
Uye iwe unozomira kuve chidzoyi chemamiriro ezvinhu
Nekuti iwe pachako ndiwe mugadziri wemagumo ako.
Simuka utarise zuva mangwanani
Uye fema mwenje wemambakwedza.
Iwe uri chikamu chesimba rehupenyu.
Zvino chimuka, urwe, famba, gadzira pfungwa dzako
Uye saka iwe uchabudirira muhupenyu;
Usambofa wakafunga nezverombo rakanaka, nekuti rombo rakanaka
Iwe unofungei nezvemagwaro aya? Iwe unofunga, sezvandinoita ini, kuti zvinyorwa zvinogona "kukuchengetedza" mune mamwe mamiriro? Iwe unayo here chimwe chinyorwa kuti chikubatsire iwe uye unoda kugovana? Kupera kwevhiki kwakanaka!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Zvinyorwa zvemazuva akaipa
Ini ndinokurudzirawo kwemazuva akaipa (uye neakanaka) kuverenga Carmen Guillén